Fandefasana tovovavy hiasa any Koweit sy Arabia Saodita : olona telo saron’ny polisy naiditra am-ponja | NewsMada
Fandefasana tovovavy hiasa any Koweit sy Arabia Saodita : olona telo saron’ny polisy naiditra am-ponja
Niakatra fampanoavana, afakomaly ka naiditra am-ponja eny Antanimora ireo olona telo (lehilahy roa sy vehivavy) voarohirohy ho nikasa hanondrana tovovavy any Koweït sy Arabie Saodita. Ny polisy miasa ao
amin’ny Service central des enquêtes spécialisées et de la lutte contre les fraudes documentaires (SCESLFD) no nahasambotra azy ireo. Araka ny fanazavan’ny polisy, nahazo loharanom-baovao izy ireo fa misy olona mandefa tovovavy hiasa any Koweït sy Arabie Saodita. Nanao fikarohana sy fitsirahana ny polisy ka tratra tao amin’ ny trano iray eny Ankasina, ny talata lasa teo ny vehivavy dimy hihazo ny firenena Arabo. Nilaza izy ireo nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa hoe avy any amin’ ny faritra Sava no tonga hiakatra eto Antananarivo hitady lalana hiasa any Koweït sy Arabie Saodita. Niainga avy amin’ny fanadihadiana ny tompon-trano ny nahafantarana ireo olona tena mpanondrana ireo vehivavy ireo hiasa any amin’ny tany Arabo.
Niroso tamin’ny fikarohana ireto olona ireto indray ny polisy taorian’izay ka lehilahy roa no voasambotra teny Ambodin’Isotry ary vehivavy roa hafa teny Ivato. Nahitana paosipaoro Malagasy marobe miaraka amin’ny antontan-taratasy hosoka maromaro tao an-tranon’izy ireo nandritra ny fisavan’ny polisy.
Manome vola 1 400 000 Ar isaky ny olona…
Fantatra nandritra ny fanadihadiana ireo mpanondrana fa akan’izy ireo vola 1 400 000 Ar isan’olona izay nalefany ho tambin’ny fandefasana sy ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Niaiky izy ireo fa tena mpanondrana tovovavy hiasa any amin’ny tany Arabo.
Tsiahivina fa mbola manan-kery ny didy hitsivolana laharana 2013-594, ny 06/08/ 13 mirakitra ny fampitsaharana ny fandefasana mpiasa mankany amin’ny firenena Arabo.
Ireny efa niaraha-nahita ireny ny fahoriana nianjady tamin’ireo tovovavy sasantsasany niasa tany Koweït sy Liban ary Arabie Saodita. Efa marobe ireo niharan’ny herisetra ataon’ny mpampiasa azy any amin’ireo tany Arabo ireo. Misy aza ny fatiny sisa no tsenain’ny fianakaviana eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato. Tsy mahatonga saina ireo vehivavy sasany anefa izany fa izao mbola misy misisika ny handeha an-tsokosoko ihany. Tsy mety fay mihitsy na efa noraran’ny fanjakana aza ny fandefasana olona hiasa any. Iza indray izany no omen-tsiny raha misy zavatra mahazo ireto nikasa handeha an-tsokosoko ireto? Ekena fa sarotra ny fitadiavana asa eto amintsika fa aleo ihany mitsimpona kely eto. Tokony hojeren’ny fanjakana akaiky koa ny politikan’ny asa sy ny famoronana asa.